Qeybta 1: M4V VS MP4, Faraqa u dhexeeya M4V iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo M4V
Inkasta oo labaduba ka mid ah qaabab kuwaas la mid yihiin mid ka mid kale oo jira, iyaga oo ay leeyihiin kala duwan oo saamayn ay farsamaynta iyo sidoo kale user-saaxiibtimo. Labada of qaabab kuwani waa laysku beddelid karo, haddii ay dhacdo faylasha galmo la kordhiyo .m4v ah, ay la qori karaa .mp4 iyo files shaqeyn lahaa sidii ay caadi ahaan lahaa. Haddaba maxaad dadka qaar dooran lahaa mid ka badan kan kale? Aan ka heli badan oo inaga mid ah waxaa out.As ogaadaan, labada MP4 M4V iyo files yihiin weel files qaab kuwaas oo inta badan loo isticmaalaa in uu kaydiyo audio, video iyo xitaa files Cinwaan. MP4 u taagan tahay MPEG-4 Qaybta 14, qayb ka ah MPEG-4 taxane ah noocyada file. Sida hore u soo sheegnay, file M4V kordhin la baxshay karaa kordhin .mp4 ah, ay shardi tahay in faylka M4V asalka aan la-ilaaliyo nuqul. Faylal ay qandaraas cusub .m4v sida caadiga ah ka yar tahay ilaalinta copyright ka FairPlay DRM, kaalinta ay horumarinta ee M4V. Tani waxay noqon kartaa iyada oo loo marayo qaab ka fiican marka la barbardhigo tan.
Developer Soo diyaariyay Apple, qaabka weelka M4V la ilaaliyo oo la Apple ee technology nuqul DRM. Dhacdooyin TV, filimada, iyo videos music, ee Apple ayaa Lugood Store yihiin encoded in M4V kordhin. Xisaabaadka in ka dhigay iibsadaan rasmi ah kombiyuutarada oggolaaday Lugood helaan ilaaliyo karo files M4V. File MP4 kordhin horumarsan by simayo Ururka Caalamiga ah (ISO) loogu tala galay in la isticmaalo iyadoo ku dhowaad kasta oo warbaahinta ciyaaryahanka iyo qalab, sida inta badan ciyaartoyda warbaahinta waxaa taageera.
Taariikhda M4V waxa kale oo ku salaysan qaab file MPEG laakiin waxaa ka shaqeeya isticmaalka AVC video riixo. Files M4v oo keliya ayaa loo isticmaali karaa on idman kombiyuutarada Lugood, oo waa qaabka file default u Lugood media player. Files M4v caan baxday oo ay la socoto ah ee wax soo saarka badan Apple. Qayb ka mid ah qaab ISO ayaa warbaahinta saldhig file, MP4 ama MPEG-4 (U soo guurista Picture Expert Group-4) waa nooc hormarsan ee Qaabka File QuickTime. Qaab weel Tani waxay taageeri karaan Descriptors UJEEDDO Bilowga oo ay la socdaan hawlaha kale ee MPEG. Qaab file MP4 markii ugu horaysay la sii daayay sanadkii 1999, waxaana uu tan iyo markii uu la wanaajiyey iyo la casriyeeyay dhawr jeer ilaa ay dib-u-sii daayo 2003, sida ISO aasaasay nuqulka ugu dambeeya iyo sidoo kale version in uu hadda ku jiraa isticmaalaan qaybo badan oo adduunka ah. Gol leeyahay dambeeyay MP4 ayaa waxa uu yahay xawaaraha loading qaybsama.
Caanka Soo diyaariyay Apple, files M4V waa caadi oo caan ka mid ah dadka isticmaala waxyaabaha Apple ayaa, sida kombiyuutarka Mac, iPod iyo iPad. Tan iyo markii noocan ah file kordhiyo inta badan waa copyright ilaaliyo, waxaa xigsanaya users liisan leh oo ka mid ah waxyaabaha badan Apple. Files MP4 Multiple badbaadi kara iyo dulfuulan galay mid ka mid file keli, taas oo ah sababta ugu fiican loogu yaqaanaa shaqo fudud lagu badbaadiyo. Noocan ah qaab weel sidoo kale waa ay fududdahay in la soo guuriyeen, dhaqaaqay iyo uploaded, taas oo ay heli karaan dadka isticmaala balaadhan oo ah Qalabka telefoonada gacanta.
Durdurrada Data On the qalabka macruufka, Apple ayaa soo saartay ku Apple sameecadda ah Audio codec (ALAC) ee loo maqli gaar ah u saaraya Lugood iyo QuickTime, qoondeeyo files la kordhiyo .m4v. ALAC loo isticmaali karaa in xogta Tifaftirayaasha iyo in la yareeyo tirada files audio aan khasaaro ka mid ah macluumaadka. , Si gooni gooni ah Samaynta isticmaalka biyaha durdurrada ee gaarka loo leeyahay, macluumaad MP4 ee hoorto lagu gubay galay track gaar ah ka mid ahaa. The codecs heli karaa rasmiga ah ee qaab weel MP4 ku qoran yihiin website-diiwaangelinta awood daboolaya dhamaan ciyaartoyda ugu socon warbaahinta iyo qalabka loo isticmaali karo. MPEG-4 qaybaha 10 iyo 2, sireed Advanced Audio iyo Audio sameecadda ah iyo sidoo kale MPEG-4 lagu tiriyaa Text waa codecs in ay taageeraan durdurrada xog dheeraad ah.
Metadata Asal ahaan ka dhigan tahay "data macluumaadka", metadata waa xogta sharaxa oo dhisme ah in sharxi kara tiro ka mid ah faahfaahinta xogta laftiisa, sida sida xogta la abuuray, waxa ujeedooyinka macluumaadka ku jira oo ay la socdaan macluumaad ku saabsan abuuraha ama qoraaga macluumaadka. Info Tani waxaa lagu hayaa loona maamulaa database ah ee xogta, loo yaqaan diiwaanka metadata ama bakhaar metadata. Waa ay fududahay in la akhriyo metadata marka ay timaado qaab document qoraalka. Tan iyo MP4 M4V oo asal ahaan nooca la mid ah qaabka weelka, ma jiraan wax file kordhiyo kala duwan in ay ku kaydiso metadata si gaar ah nooc kasta. Labada isticmaalaan diiwaanka metadata ama bakhaar ay ku jiraan laga yaabaa Extensible metadata Platform ama sidoo kale loo yaqaano metadata XMP.
Faa'iido 1 -M4V files waxaa ilaaliya technology DRM.
2 -Files aqoonsan consoles'ka sida X-Box 360. 1 -Multiple MP4 files waa u fududahay in ay badbaadiyo.
2 -Large ama faylasha gaar ah la badbaadin karaa mid file movie hal.
3 - files MP4 waa user dheeraad ah oo saaxiibtinimo la eego koobiyeynta, dhaqaaqin iyo koombiyuutarka.
Qasaarooyinka 1 -Copying iyo dhaqaajinta yihiin oo keliya ee dadka isticmaala liisan leh, tan iyo files M4V yihiin kuwo la ilaaliyo.
2 - dooxeen ka DVD u baahan tahay codsiyada dheeraad ah sida WinX DVD Ripperp.
3 - Isticmaalka waa xadidan oo ay ku soo saarka Apple oo kaliya. 1 - xalka ugu sarreeya, waayo, MP4 waa 1440x1080 / 30p (16: 9).
2 - channel Audio waa kaliya laga heli karaa 2 channels / 48 kHz (frequency raystay).
3 - isticmaalaa MPEG-4 AAC LC codec audio, taas oo ah adayga hooseeyo codec.
U isticmaala in ay Taageerayaasha alaabta Apple, iyo dadka jecel files koobi-ilaaliyo ka badan kuwa aan ahayn. Ku dhawaad ​​qof kasta oo ay sabab u tahay nooca fudud shaqada iyo fududahay in hawlaha badan helaan.
Related links 1. Waa maxay sababta gacan-jabis Save DVD in M4V ma MP4 Video File
2. M4V iyo MP4
3. Faraqa u Dhexeeya Mp4 iyo M4v 1. Faraqa u Dhexeeya Mp4 iyo M4v
3. Maxay gacan-jabis Save DVD in M4V ma MP4 Video File
MP4 M4V oo jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 M4V oo isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 M4V iyo video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 M4V ama inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya MP4 ama file M4V in aad rabto in aad kala soo bixi. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli karto MP4 tayada ugu wanaagsan iyo files M4V ah.
By gujinaya ah "Download" button u dhow deegaanka video ah: Marka aad la ciyaareyso videos on websites video caanka ah sida YouTube, waxa aad ka arki kartaa "Download" button sare ee video ah kaas oo ay bixiyaan Wondershare AllMyTube. Dhag siinaya batoonka taasi bilaabi doonaa howsha download in AllMyTube isla markiiba.
Isticmaalka badhanka "URL paste": Haddii aadan heli karin "Download" button sare ee video aad rabto in aad kala soo bixi, waxaad isticmaali kartaa "URL paste" button of Wondershare ka AllMyTube. Just nuqul ka URL ee video aad rabto in aad ka soo dejisan iyo paste in interface software iyo bilowdo video ah.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 in la M4V adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "M4V".
Talaabada 5 Play faylka M4V bixi
> Resource > MP4 > M4V VS MP4, Faraqa u dhexeeya M4V iyo MP4